Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0812 lak
Alakamisy 22 Nov.
Ny hevitry ny fitantanana dia ny mba hahavitan’ny zavatra tiana hatao. Mihatra izany na eo amin’ny fiainan’ny fiaraha-monina an-kapobeny na eo amin’ny fiainam-piangonana. Tafiditra ao anatin’io fitantanana io koa ny fandaminana, izay midika ho fandaminana ny zavatra rehetra hanaraka ny fitsipika sy ny lalàna ary ny rafitra nokendrena hanamorana ny asa atao. Zava-dehibe tsy azo avela eo amin’ny lafiny fitantanana ihany koa ny fahefana. Eo amin’ny fizotry ny fiainam-piangonana àry, iza no manana fahefana hanome alalana ny zavatra sasany ary iza no azo omena alalana hanao izany? Ny valin-teny samihafa momba ireo fanontaniana ireo no nahatonga ny endri-pitantanana samihafa eo anivon’ny fiangonana.
Ny fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito dia manana rafitra mampiavaka azy eo amin’ny fitantanana ny fiangonana. Ny tena tsara indrindra dia ireo mpitarika ihany no misolo tena ary mandray ny fahefana sy ny andraikitra atolotry ny mambra azy. Tsy ampy ny mampiseho fa miorina amin’ny Soratra Masina ny rafi-pitantanan’ny fiangonana. Ny fampiharana ny fahefana ao anatin’ny rafitra dia tsy maintsy ahitana hafanam-po amin’ireo soatoavina ampianarin’ny Baiboly.
Jereo ny Asa. 15:1-29. Inona no azontsika ianarana avy amin’ireo andininy ireo mikasika ny fitsipika lehibe sasantsasany tafiditra eo amin’ny fandaminana sy ny fitantanana ny fiangonana.
Na inona na inona azontsika ianarana avy amin’ireo andininy ireo mikasika ny fitantanana ny fiangonana, dia misy lafiny anankiray tokony hazava tsara: ny fandaminana ny fiangonana dia tokony hiorina eo amin’ny fampandrosoana ny asa fitoriana ny filazantsara. Raha ara-Baiboly, rehefa tsara tantana ny fiangonana dia mahomby ihany koa ny fampandrosoany ny asa nanirahana azy eo amin’ny fitoriana ny filazantsara.
Tokony hotsaroantsika ihany koa fa na dia mampiasa ny fahefany amin’ny alalan’ny fiangonana sy ireo olona voatendriny aza i Kristy, dia tsy nanolotra velively ny fahefany ho azy ireo. Izy hatrany no lohan’ny fiangonana (Efes. 1:22). Fantatry ny fiangonana voalohany tsara fa tsy azon’izy ireo atao ny mampiasa fahefana raha tsy i Kristy sy ny teniny no manome alalana azy hanao izany. Ao amin’ny Asa 15:28, dia zava-dehibe ho an’ny fiangonana ny nanapa-kevitra araka izay “sitraky ny Fanahy Masina”, ilay tena solotenan’i Kristy. Tsy tokony hivaona amin’izany ny mpiandrakitra raharahan’ny fiangonana amin’izao fotoana izao.
Diniho ny Mat. 20:24-28 sy ny 23:8. Inona no ambaran’ireo mikasika ny fampiharana ny fahefana eo amin’ny fiangonana eo amin’ny sehatra rehetra?
Manao ahoana ny fahavononanao hanompo ny hafa? Saintsaino lalina ny antony manosika anao manokana, ary manao ahoana izany raha jerena araka ny zavatra ataonao ao am-piangonana, na inona andraikitra tananao na inona. Inona avy ireo antony ireo ary ahoana no hahatonga azy hifandrindra bebe kokoa amin’ireo fitsipika voambaran’ny Teniny?